Ahoana ny famerenana lalao amin'ny Steam? (Torolàlana ho an'ny fangatahana) - Lalao
Te hamerina lalao amin'ny Steam ve ianao?Nahazo ny lamosinao izahay!Naka lalao iray izay ny fonony dia toa tsara nefa nivadika ho zavatra tsy nampoizinao?Aza manahy fa afaka mamerina ny lalao amin'ny Steam ianao. Nanomana lahatsoratra feno izahay izay nandrakotra izay rehetra ilaina mba hahazoana tamberina amin'ny Steam.
Ity torolàlana ity dia handrakotra ireo dingana takiana mba hahazoana vola amin'ny Steam, ny fahazoana mahazo vola amin'ny Steam, ary ny fanontaniana napetraka matetika hanampiana anao.Ka omeo vakiana ity lahatsoratra ity hahafantaranao ny zava-drehetra momba ny Steam Refunds.
Miatrika olana amin'ny Steam-nao? Taratasim-bola Steam Tsy mandeha Guide.
Dingana tokony hamerenana ny lalao amin'ny Steam:
Ny fahazoana famerenam-bola ho an'ny lalao dia tsotra sy asa tsy misy olana raha manaraka miaraka aminay ianao. Nolazainay tamin'ny antsipiriany ny dingana tsirairay mba hahafahanao mahazo famerenam-bola mora amin'ny Steam. Ireto ny dingana ahafahanao mahazo famerenam-bola:
Mandrosoa Steam amin'ny fipihana Eto . Ity dia tranonkala fanohanana an'i Steam izay ahitanao safidy maro hisafidianana ny kaontinao.
Raha vantany vao nandefa Steam Support ianao dia midira amin'ny kaonty Steam.
Aorian'ny fidirana an-tsokosoko dia ho entina ao amin'ny kaontinao ianao. Safidio eo amin'ny kiheba ‘Vidio’, izay hitondra anao any amin'ireo fividianana nataonao.
Ankehitriny, hanana ny lisitry ny lalao novidinao ianao. Safidio izao ny lalao tadiavinao ny famerenam-bola.
Raha vantany vao mifidy ny lalao ianao dia hanontany ny Steam ny antony itiavanao ny famerenam-bola amin'ny lalao. Azonao atao ny misafidy antony iray amin'ireo lisitra roa nomena.
Ankehitriny, hanontany anao i Steam raha te-hamerina ianao na hanamboatra ilay olana ara-teknika. Tsy maintsy misafidy ny safidy Refund ianao. Hoentina mankany amin'ny pejy famerenam-bola ianao izao ahafahanao mameno ny taratasy famerenam-bola.
Amin'ity pejy ity dia azonao atao ny misafidy izay tianao hamerenana izany raha mila famerenam-bola ao amin'ny kaonty Banky na Steam Wallet ianao. Nanafotra anao tamin'ny safidy Safidy ny etona. Azonao atao ny misafidy ny safidy fandoavam-bola ary tsindrio ny 'Fangatahana fangatahana', eo amin'ny zoro ambany-havia amin'ny efijery.
Aorian'ny fanarahana am-pahombiazana ireo dingana rehetra ireo dia hahazo famerenam-bola amin'ny lalao ianao nefa tsy holavina.
Halaviro ny fandavana ny fandoavana ny Steam - Fahafahana miverina
Misy andiam-pitsipika sasany ahafahanao mahazo famerenam-bola. Mila mitandrina ireo fitsipika ireo ianao alohan'ny hangataka famerenam-bola mba tsy ho voahilika amin'ny Steam Game Refund ianao. Ireto misy teny sasany izay tsy maintsy eken'i Steam famerenam-bola.
Ny volabe dia hatomboka ary ekena raha averina sy averina ao anatin'ny 14 andro aorian'ny fividianana ny lalao.
Ny lalao dia haverina raha tsy nilalao ny lalao latsaky ny 120 minitra ianao. Raha toa ka mipaka hatrany amin'ny 121 mn ny filalaovana dia holavina ianao amin'ny famerenam-bola.
Ny teny hoe Refund of Steam dia tena henjana, ary manaraka ireo fitsipika ireo foana izy ireo. Diniho tsara ireo zavatra ireo alohan'ny hangatahanao Refund.
1Q. Maharitra hafiriana ny Steam Refund?
taona:Aorian'ny fanekena ny Steam Refund anao dia mandany 2-3 ora fotsiny ny famerenam-bola. Raha nisafidy famindram-bola iraisam-pirenena ianao dia mety maharitra 5-7 andro fiasana.
2Q. Inona ny fetra ahazoana famerenam-bola amin'ny Steam?
taona:Tsy misy fetra voalazan'ny Steam, milaza ny isan'ny famerenam-bola natomboky ny mpampiasa iray. Fa raha manandrana mamerina ny lalao rehetra novidinao ianao dia mety manakana anao vetivety i Steam amin'ny Refunds.
3Q. Inona avy ireo lohateny vaovao miakatra amin'ny 2021 amin'ny Steam?
taona:Miaraka amin'ny console Gen manaraka izay nanova ny filalaovana dia nivoatra ihany koa ireo lalao hijoro matanjaka eo amin'ny tsena. Ireto ny lalao Top 3 ho avy amin'ny 2021:
Genius ratsy 2.
Manantena izahay fa nanatanteraka ny tanjonao ny lahatsoratray ary nanampy anao hahazo famerenam-bola amin'ny lalao. Raha manana eritreritra na fanontaniana momba ny Steam GAme Refund ianao dia azonao atao ny mametraka azy ao anaty boaty fanehoan-kevitra etsy ambany.
Roblox Music Codes - Torolàlana hikarohana karazan-kira (Dec. 2020)
sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet tsy misy fandoavam-bola
misintona youtube mp3 android amin'ny Internet
misintona mozika maimaim-poana avy amin'ny youtube mankany amin'ny mpanova mp3
mijery lalao seza fiandrianana eo amin'ny putlockers
tranokala hijerena fanatanjahantena maimaimpoana
sarimihetsika tsara indrindra amin'ny horonan-tsary voalohany